Standalone VR, ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိလာမည့် Google မျက်မှန်သစ်များ Androidsis
Standalone VR, ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိလာမည့် Google Glass အသစ်များ
J.Vargas | | Android ထုတ်ကုန်များ, အခြားကိရိယာများ
ယခုတိုင်အောင်,aကိုအသုံးပြုရန်အတွက် virtual reality မျက်မှန် ကျွန်ုပ်တို့မှာ gadget ကိုသာမကပဲသင့်တော်တဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ် (ဈေးကွက်မှာများများစားစားမရှိပါဘူး) ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမအောင်မြင်တာကကွန်ပျူတာတစ်လုံး (ဘယ်ကွန်ပျူတာကမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး) ။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာသူတို့လိုအပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် VR မျက်မှန်များအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုငါပြောရင်ကော လွတ်လပ်စွာ?
သေချာတာပေါ့၊ ဒီနည်းပညာကိုလိုက်နာဖို့ယုတ္တိရှိတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ထင်ရပြီးဂူးဂဲလ်ကဒီရက်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီ ဒီနှစ် 2017 ၏အဆုံး။ ထိုအချိန်တွင် Mountain View ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမျက်မှန်မော်ဒယ်ကိုလမ်းပေါ်တွင်ထားရန်စီစဉ်ထားသည်။ "သီးခြားစီ VR နားကြပ်".
အဆိုပါ Standalone VR ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဂူဂဲလ်သည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Qualcomm မှ၎င်းနှင့်အတူ Worldsense နည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းမျက်မှန်များကိုအသုံးပြုသူ၏ရွေ့လျားမှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ပြင်ပအာရုံခံကိရိယာများသို့မဟုတ်ကင်မရာများကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ။ သူသည် Lenovo ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် HTC က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မျက်မှန်များဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန် (HTC Vive) သည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ ပြည့်သည်.
Virtual reality သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်နည်းပညာဖြစ်လာစေရန် (အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်လာမည့်အရာ) သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲထိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်မျက်မှန်များသည်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အရာအားလုံးကိုရိုးရှင်းစွာအားဖြင့်။ အစပိုင်းတွင်၎င်းကို Standalone VR ဟုယူဆရန်လိုအပ်သည် ဒါဟာအိတ်ကပ်အားလုံးအမျိုးအစားများအတွက်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ gadget ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေစတင်သည့်ရက်စွဲမည်သည့်အချိန်နှင့်ဤစက်အသစ်၏စျေးနှုန်းနှင့် ၄ င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျသိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Standalone VR, ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိလာမည့် Google Glass အသစ်များ
Samsung ကသူ့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတိုးချဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပြသတော့မည်